eTurboNews izita rinotyisa rekuisa branding: Heino chikonzero
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » eTurboNews izita rinotyisa rekuisa branding: Heino chikonzero
Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hawaii Kupwanya Nhau • HITA • LGBTQ • misangano • nhau • vanhu • Dhinda Zviziviso • Kubatana • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Waini & Midzimu • Wtn
eTurboNews izita rinotyisa rekuisa mucherechedzo. Nhoroondo yeichi chinyorwa chinotungamira pasi rose chakanangana neindasitiri yekufambisa, mararamiro, uye kodzero dzevanhu yakasarudzika uye yakatanga muIndonesia.
Muna 1999-2001, DMC Bloody Good Stuff pasi pehutungamiriri hwaJuergen Steinmetz naMelanie Webster vakamiririra Indonesia Tourism muUnited States neCanada.
Izvi zvakarongwa pamwe chete neaimbova Gurukota reIndonesia reTsika neKushanya, takanonoka Hon. Ardika kubva kuBali.
Rimwe rematambudziko panguva iyoyo raive rezvematongerwo enyika uye rakakonzera nyevero dzekufamba neUnited States pamusoro peRepublic of Indonesia.
Muna 2000, pamutambo wekushanya weTIME muJakarta, Juergen Steinmetz akapihwa menduru yekubudirira kwakakosha kuIndonesia Tourism neMutungamiri weIndonesia muchiitiko chikuru paPlaza Indonesia.
Panguva iyoyo masangano ehurumende akanga asingavimbi nemasangano akazvimirira, uye masangano akazvimirira aisavimba nehurumende. Bloody Good Stuff yakatanga Indonesian Council of Tourism Partners kuunza indasitiri pamwe chete.
ICTP yaitsvaga nzira isingadhure yekutarisa masangano ekufambisa eUS kudzidzisa chikamu nezvenzvimbo yeIndonesia. Izvi zvaidikanwa kuti meseji ibude kuti matambudziko muJakarta haasi kukanganisa kushanya muBali semuenzaniso.
IInternet yaive muzera remucheche, asi vazhinji vamiririri vekufamba vagara vaine maemail, vamwe vaive nemawebhusaiti.
Juergen Steinmetz akabatana neSingapore-based eTurbo Hotels semutsigiri uye akatanga pepanhau rekutanga reindasitiri yevashanyi vepasi rese vachishandisa fomati yeYahoo Group. Yakanzi eTurboNews, vachiziva mubatsiri.
eTurboHotels yaive yekutanga kambani yemhando yeExpedia. Vaive vane mawebhusaiti akawanda sesheraton.id kana hilton.id uye vakapa kuvaka webhusaiti yemahara yemakambani ekufambisa eIndonesia. Iyo monetarization modhi yaive yekuchaja komisheni yekubhukidza online.
Nerubatsiro rweIndonesia yekufambisa uye yekushanya indasitiri, izvi eTurboNews Yahoo Group yakakura nekukurumidza.
Mamwe mapoka, akaita seASEAN TOURISM DISCUSSION Group ine simba, akaunza vatungamiri mumasangano akazvimirira uye ehurumende kubva kunyika dzeASEAN pamwe chete kuti vakurukure nezvekubatana kwekushanya. Zvizhinji zvezvirongwa zvazvino mukati meASEAN tourism zvakatanga munhaurirano iyi.
Boka reHawaii Talk Group rakave mukana wekushambadzira-wemahara wevamiriri vekufamba kuti vataure nemahotera nevamwe vatengesi vekuHawaii uye kuchinjana mazano, kurumbidza, uye kushoropodza. Muna 2002 eTurboNews,vakaudzwa na Hawaii Tourism Chiremera (HTA) kuti machat rooms eInternet akanga asina nguva yakawanda yemberi, uye vaisazofunga kutsigira nhaurirano yakadaro.
Panguva ino, eTurboNews akatanga akati wandei mabloggi akakurumbira anosanganisira Misangano, Aviation, Wines, GayTourism, TravelIndustryDeals, WorldTourismWire, uye HawaiiNews.Online yakarumbidza neyayo pasocial media chiteshi.
eTurboNews kubatanidzwa kwakawedzera kupota pasi rose, uye zvinyorwa zvinogona kuonwa zvakaburitswa paHindustan Times muIndia pakati pezvimwe zvakawanda.
eTurboNews yakava chishandiso chitsva cheruzivo rwekufamba uye kushanya kwakakurumidza kukura mune mamwe matunhu epasi. eTurboNews yakashandura fomati kubva kuYahoo Group kuenda kune mamwe maemail mafomati akawanda, yakazvimiririra kubva kuIndonesia muna 2001, uye yekutanga yakazvimiririra yakazvimiririra pamhepo midhiya yechikamu chekufambisa uye yekushanya yakatangwa.
Makore makumi matatu gare gare, eTurboNews zvichiri kuramba zviri dhiri chaiyo.
eTurboNews yaive uye ndiyo yekutanga tsamba yepasi rose inoburitswa awa yega yega 24/7. Ndiyo yega yakazvimirira uye yepasirese nhau waya muindasitiri yekufambisa uye yekushanya ine pfungwa dzemukati munhu anogona chete kuwana paTN.
Iine 230,000+ yekufamba kutengeserana email vanyoreri, iyo email yekugovera iko zvino ingangoita gumi muzana yehuwandu hwekuverenga.
Nhau dzinounganidza dzinosanganisira Google neBing Nhau, Breaking News, social media, uye push notices zvakawedzera kuoneka kwe eTurboNews zvikuru nekufamba kwemakore.
Gore rapfuura, Hawaii ine dzimbahwe eTurboNews yakagadzira mawebhusaiti akazvimirira makumi mapfumbamwe nemaviri ane zviyero zvayo uye SEO kusimudzira zvirimo mumitauro makumi mapfumbamwe nemaviri pasi rose. ChiSpanish, chiGerman, chiFrench, chiChinese, chiArabic, chiHindi, chiSwahili, chiPutukezi, nechiItalian ndidzo dziri pamberi pevaverengi vasiri veChirungu.
Neanopfuura mamirioni maviri evaverengi eAmerica akasiyana anovhura eTurboNews , United States ndiyo ine vanhu vakawanda zvikuru, ichiteverwa neUK, Germany, India, neCanada.
pari eTurboNews inoonekwa munyika nenharaunda 238. Idiki ndima iri muAntarctica ine muverengi mumwe chete, uye hazvizivikanwe kuti muverengi uyu ndiani.
Maguta makuru uko eTurboNews inogona kuwanikwa iFrankfurt, Washington, London, New York, uye Duesseldorf.
eTurboNews iri nhengo yekutanga African Tourism Bhodhi, ivo International Mubatanidzwa weVashanyi Partner, Uye World Tourism Network, ndokusimbisa yakazvimirira Hawaii Tourism Association mukupindura kune yaimbova Hawaii Talk Yahoo Group.
eTurboNews inoramba iri muHonolulu, Hawaii, USA, ine basa rakazvimirira muDuesseldorf, Germany, uye vanyori vanozvimirira munyika dze128.
eTurboNews anoramba ari mutungamiri asina kupokana uye ari pamberi pekuzvimiririra kushuma kune yepasi rose yekufambisa uye yekushanya indasitiri, inobata mararamiro, fashoni, kodzero dzevanhu, uye zvimwe zvinonakidza zvirimo.
COVID-19 payakarwisa nyika yekushanya, eTurboNews pamwe chete nePATA, Nepal Tourism Board, uye African Tourism Board vakavamba Kuvaka zvakare.travel boka muna Kurume 2020 padivi peiyo yakamiswa kutengeserana ITB show muBerlin, Germany.
Boka iri rakapinda mukati World Tourism Network ine nhengo dziri munyika 128 parizvino.
Mushure mehurukuro 257 dzakakurumbira dze zoom, eTurboNews uye World Tourism Network yakakwanisa kuchengetedza indasitiri yekufambisa uye yekushanya nevatungamiriri vayo vakabatana uye vachibatikana.
ne Livestream, eTurboNews yakatanga yayo yekutanga 24/7 yepasi rose vhidhiyo nhau chiteshi, iyo Breaking News Show, uye eTV. Vaverengi vanogona kuona mavhidhiyo eTN uye nhaurirano dzenguva-chaiyo dziri kutamba pane zvese eTurboNews mawebhusaiti, vanobatana navo, uye akawanda emapuratifomu.
Izvi zvinowedzerwa neyakakura eTN Podcast sarudzo. Chinyorwa chitsva chega chega pa eTurboNews ikozvino inogona kuverengwa, kuteererwa sepodcast, uye kutariswa sevhidhiyo pa eTN YouTube Channel uye omapuratifomu anozivikanwa.
Nyika neMatunhu uko eTurboNews zvinoonekwa:
Chamhembe Afrika: 54,047 XNUMX
Portugal: 30,215 XNUMX
Spain: 19,492 XNUMX
Maodzanyemba Korea: 10,887
Saudi Arabia: 8,921
Ireland: 8,541 XNUMX
Hong Kong: 8,117
Sri Lanka: 7,168 XNUMX
Denmark: 6,276 XNUMX
Uganda: 5,992 XNUMX
Czechia: 5,333 XNUMX
Bulgaria: 4,793 XNUMX
Trinidad neTobago: 4,196
Seychelles: 4,044 XNUMX
Slovakia: 3,795 XNUMX
Estonia: 2,766 XNUMX
Colombia: 2,561 XNUMX
Puerto Rico: 2,300
Bahrain: mazana matatu nemakumi mashanu
Albania: 2,087 XNUMX
Azerbaijan: 2,063 XNUMX
Armenia: 1,787 XNUMX
Myanmar: 1,778 XNUMX
Dominican Republic: mazana maviri nemakumi matatu
North Makedhoniya: 1,660
Kosta Rika: 1,631
Botswana: 1,493 XNUMX XNUMX
Laos: 1,294 XNUMX
Bosnia neHerzogovina: 1,145
Iceland: 1,061 XNUMX
Antigua neBarbuda: 1,023
Mozambique: 906 XNUMX XNUMX
US Virgin Islands: 718
Malawi: 716 XNUMX XNUMX
St. Kitts neNevis: 688
Cayman Islands: 659
Cote d'Ivoire: 597
Siriya: 523 XNUMX XNUMX
Congo – Kinshasa: 514
Solomon Islands: 477, XNUMX
Libya: 458 XNUMX
Sint Maarten: 434
Lesotho: 406 XNUMX XNUMX
Maodzanyemba eSudan: 396
St. Vincent & Grenadines: 366
Sierra Leone: 337 XNUMX XNUMX
El Salvador: 302 XNUMX, XNUMX
Dominica: 296 XNUMX
Papua New Guinea: 286
Turks & Caicos: 276
Nicaragua: 207 XNUMX XNUMX
Zvitsuwa zveBritish Virgin: 196
Caribbean Netherlands: 149
French Polynesia: 145
Cape Verde: 134, XNUMX
Burundi: 133, XNUMX
American Samoa: 93
St. Martin: 91
New Caledonia: 80
Turkmenistan: 62 XNUMX XNUMX
Zvitsuwa zveNorth Mariana: 57
Equatorial Guinea: 51
Timor Leste: 50
Zvitsuwa zveFaroe: 48
San Marino: 36
French Guiana: 33
Cook Islands: 30
Central African Republic: 29
Sao Tome & Principe: 20
St. Helena: 19
Isle of Man: 16
Marshall Islands: 16
Western Sahara: 14
Falkland Islands: 11
Tuvalu: 10 XNUMX
Aland Islands: 5
Nzvimbo yeBritish Indian Ocean: 3
Svalbard naJan Mayen: 3
Norfolk Islands: 2
St. Pierre & Miquielon: 2
Maguta makuru uko eTurboNews zvinoonekwa:
New York, NY: 69,582
Los Angeles, CA: 43,524
Ashburn, VA, USA: 38,640
Houston, TX: 22,178
Dallas, TX: 22,164
Charlotte, NC: 20,006
Funchal, Madeira: 19,494
Newcastle pamusoro peTyne: 19,326
Dubai, UAE: 18,771
Atlanda, GA: 18,654
Orlando, FL: 17,524
Denver, CO: 17,500
Austin, TX 15,476
Dar es Salaam: 14,464
San Francisco: 13,713
San Diego, CA: 13,141
Portland, KANA: 12,923
Quezon Guta: 11,126
Minneapolis, MN: 10,915
Chantily, VA: 10,673
Indianapolis, IN: 10,202
Birmingham, AL: 10,159
Cape Town: 10,131
Sacramento, CA: 9,947
Miami, FL: 9,885
Tanmpa, FL: 9,634
San Antonia, TX: 8,813
Kansas City, MO: 8,848
Kuala Lumpur: 8,160
San Jose: 7,855
Baltimore, MD: 7,680
Detroit, MI 7,357
Madison, WI: 7,251
Chitubu, MO 7,024
Milwaukee, WI: 6,941
Salt Lake City, UT: 6,682
Tel Aviv: 6,348
Cleveland, O: 6,263
Omaha, NE: 6,210
Memphis, TN: 5,634
Cebu Guta: 5,633
Villa do Conde: 5,049
Oklahoma Guta, OK: 4,830
Cincinnati, OH: 4,554
Atene: 4,423 XNUMX
Albuquerque, NM: 4,228
Arlington, VA: 4,147
St.Louis, MO: 3,986
Aurora, CA: 3,554
Colorado Springs, CO: 3,538
Lincoln, NE: 3,173
Ann Arbor: 3,061
Lexington, KY: 3,051
Mesa, AZ 3,047
Albany, NY: 3,045
Grand Rapids, MI: 3,032
Ewa Gungwa, HI 2,914
New Orleans, LA: 2,877
Ho Chi Minh Guta: 2,869
Myrtle Beach: 2,857
Mhoro, HI: 2,852
Mutsvene Michael: 2,819
Long Beacj, CA: 2,714
Fresno, CA: 2,612
Spokane, WA: 2,560
Des Moines, IA: 2,539
Anchorage, AK: 2,468
Kochi: 2,450 XNUMX
Ulan Baatar: 2,380
Rancho Cucamonga: 2,372
Scottsdale, AZ 2,220
Santa Rosa: 2,319
Oakland, CA: 2,220
Sioux Falls: 2,216
Saint Petersburg: 2,171
Reno, NV: 2,154
Cape Coral: 2,117
Eugene, KANA: 2,098
Jersey Guta, NJ: 2,065
Bakersfield, CA: 2,053
Montgomery, AL: 2,052
Santa Clara: 2,050
Anaheim, CA: 2,039
Kailua-Kona, HI: 2,030
Petersburg: 1,897 XNUMX
Peoria, IL: 1,893
Mukuru wezana: 1,868
Phnom Penh: 1,867
New Delhi: 1,841
Wichita, KS: 1,833
Chikomo Chikomo: 1,832
Ft. Lauderdale: 1,783
Zvitubu zveSaratoga: 1,725
Pirt St. lucie: 1,709
Mutsvene Pauro: 1,668
Guta reMexico: 1,661
Chandler, AZ: 1,644
Santa Clarita: 1,633
Fairlild, VA 1,539
eTurboNews chikamu che TravelNewsGroup. Mamwe manhamba arikusvika eTurboNews Inogona kuwanikwa pa travelnewsgroup.com/reach.